Professional Resources - Victim information – Somali
Victim information – Somali
MACLUUMAADKA KAARKA DHIBBANAHA
Xuquuqda iyo Adeegyada dhibbanayaasha Dambiga oo idil
Waxaa xaq u leedahay in aad codsato caawinaadda dhaqaalaha ku saabsan khasaaraha kaa soo gaaray dagaalka dambiga. Kaalmadaas ma daboolayso khasaarihii hantida. Wixii ku saabsan dabbaqaadda iyo macluumaadka ka wac 651-201-7300. Wixii ka baxsan nawaaxiga Magaalooyinka Mataanaha ka wac: 888-622-8799 ama gal OJP Website: ojp.dps.mn.gov.
Waxaa xaq u leedahay in aad codsato in hahay’adda nabadsugiddu aanay u bandhigin dadweynaha xogta aqoonsigaaga. Hay’adda nabadsugiddu waxay go’aaminta doontaa suurtagalnimada arrintaas.
Xaq waxa aad u leedahay, haddii eedaysanaha la xukumay, in lagu soo wargaliyo iyo in aad ka qaybgasho hawlsocodsiinta dacwadda, oo ay ku jirto codsiga soo celinta (lacagta ay maxkamaddu amartay in dambiiluhu siiyo dhibbanaha).
Haddii aad ay kula tahay in lagu xadgudbay xuquuqdaada dhibbane ahaan, ka wac Cutubka Caddaaladda Dhibbanaha Dambiga (Crime Victim Justice Unit) telefoonka 651-201-7310 ama 800-247-0390, cjvu.ojp@state.mn.us.
Xuquuqda ay Leeyihiin Dhibbanayaasha Xadgudubka Guriga
Waxa aad weydiisan karta dawladda hoose ama xeer ilaaliyaha degmada xaraynta dacwad ciqaabeed.
Waxaa kale oo xaq u leedahay in aad maxkamadda tagto iyo xarayso dacwad aad ku codsanayso Amarka Ilaalinta xadgudubka guriga. Amarka waxaa ku jiri kara waxaa soo socda:
amarka ah in xadgudbuhu aannu la imaan xadgudub dambe;
amarka ku waajahan in xadgudbuhu uu isaga tago gurigaadaan;
amarka looga ilaalinayo in xadgudubluhu soo galo gurigaada (ama goob macquula ee agagaarka gurgaada), dugsiga, ganacsiga ama gobta shaqada;
amarka laguugu bixinayo haynta waalidnimada/ama booqashada canugga yar ama caruurta; ama
amarka ku waajahan xadgudublaha ee ku saabsan bixinta masruufka ilmaha haddii xadgudubuhu maxkamaddu sidaas ku amartay.
Waxaa kale oo aad xaq u leedahay ogaysiiska haddii eedda dacwadda hoos loo dhigo ama ciqaabta lagu waayo.
Wixii caawimaad ah ee ku saabsan u helitaanka gargaarka maxalliga ah Amarrada Badbaadinta iyo Amarrada Xakamaynta Xasaradaynta, kala xiriir:
Khadka Qalalaasaha ee Minnesota Day One: Wac 866-223-1111 ama u tekst garee 612-399-9995. Halkan guji si aad u tagto barta internetka.
Si aad u hesho bixiye adeeg dhibbane iyo ilo kale gudaha Minnesota, Halkan guji ama la xiriir hay'adda fulinta sharciga ee deegaankaaga.
Shuruudaha U Wargalinta Xeerka Ee Loogu Talagalay Sharci Fulinta
Saraakiisha fulinta sharciga ayaa ah inay u qaybiyaan ogeysiiska hore ee xuquuqaha iyo ilaha dhammaan dhibbanayaasha dambiyada marka ugu horeysa ee ay xiriiraan. Xeerarka Minnesota qaybta 611A.02, qodobka. 2(b).
Saraakiisha fulinta sharciga ayaa ah inay u ku siiyaan macluumaad dheeraad ah ogeysiiska hore dhammaan dhibbanayaasha ku tacaddiga guriga. Xeerarka Minnesota qaybta 629.341, qodobka. 3.